बोर्डको काम निजीक्षेत्रमैत्री हुनुपर्‍यो | गृहपृष्ठ
Home अभियान परिशिष्ट (सप्लिमेन्ट) बोर्डको काम निजीक्षेत्रमैत्री हुनुपर्‍यो
नेपालको धितोपत्र बजारका गतिविधिलाई एक स्वतन्त्र विज्ञका हिसाबले हेर्दा कस्तो देख्नुहुन्छ ?
नेपाल धितोपत्र बजारको विकास गति राम्रो छ । आजभन्दा झन्डै १५/१६ वर्षअघि हामीले ‘ओपन आउटक्राई’ सिस्टमबाट कारोबार गरिरहेको थियौं भने अहिले अनलाइन प्रणालीमार्फत कारोबार गर्दै आएका छौं । आज ब्रोकरहरूले नेप्सेमा गएर कारोबार गर्नुपर्ने अवस्था छैन । उनीहरू आफ्नै अफिसमा बसेर काम गर्न सक्छन् । विभिन्न नयाँ प्रविधिहरू ल्याइएको छ, जस्तै– सीडीएस सिस्टम, सी–आस्बा प्रणाली आदि छन् । हालै लगानीकर्ताले घरमै बसेर शेयर बजारमा लगानी गर्न सक्ने अवस्था छ । त्यसैले शेयर बजारमा जे जति पनि सुधारहरू भएका छन्, तिनलाई वास्तवमै सन्तोषजनक नै मान्नुपर्छ । बजारको बनावट हेर्दा भने अझै एउटै क्षेत्रको अर्थात् वित्तीय क्षेत्रको बाहुल्य छ । वास्तविक (रियल) क्षेत्रहरू अझै निकै कम छ । यसमा विविधता ल्याउन पनि जरुरी देखिन्छ । अन्यथा यसमा भई रहेका सुधारका कार्यहरू राम्रै भइरहेको छ । यसलाई निरन्तरता दिएर जानुपर्छ ।
शिवम् सिमेन्ट केही समयअघि नेप्सेमा सूचीकृत भइसक्यो । अझै अरू रियल क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई ल्याउन के गर्नुपर्ला ?
विगतमा यसबारे प्रयत्न नभएका होइनन् र नआएका पनि होइनन् । नेकोन एयर जस्ता विभिन्न कम्पनी आएर पनि टिक्न नसकेका हुन् । यस्ता क्षेत्र नआउनुमा मैले देखेको दुई–तीन कारण छन् । एउटा त समग्र मुलुकमा रियल क्षेत्र अर्थात् उत्पादनमूलक क्षेत्रहरू विस्तार हुन नसक्नु पनि हो । नेपालकै समग्र जीडीपीमा यस्ता क्षेत्रहरूको हिस्सा १६ प्रतिशतबाट ६ प्रतिशतमा झरेको अवस्था छ । दोस्रो कारण भन्नुपर्दा, वित्तीय क्षेत्रहरूमा नियमन जति राम्रो छ, त्यस्तै नियमन रियल क्षेत्रमा त्यसलाई पाइँदैन । यसकारण रियल क्षेत्र केही गरेर बजारमा आउन खोजे पनि सर्वसाधारण लगानीकर्ताको विश्वास त्यसप्रति त्यति धेरै हुँदैन । तेस्रो कारण भन्नुपर्दा, यो उद्योग व्यवसाय केही प्राइभेट कम्पनीमा निहित छ । तिनलाई पब्लिक लिमिटेडमा रूपान्तरण गर्न सकियो भने मात्र कारोबार पारदर्शी बनाउन सकिन्छ, संस्थागत सुशासन ल्याउन सकिन्छ र सर्वसाधारणको विश्वास जित्न सकिन्छ ।
यो बजारले राष्ट्रिय पूँजी निर्माण, परिचालन र विकासमा कत्तिको योगदान देख्नुहुन्छ ? पूँजीबजारलाई आन्तरिक पूँजी परिचालनको माध्यम बनाउने सन्दर्भमा कत्तिको सार्थक काम भएकोे छ ? धितोपत्र बजारमा रहे/भएका कमीकमजोरी के देख्नुहुन्छ ? यी कमी कमजोरी कसरी हटाउन सकिएला ?
यो धितोपत्र बजार भनेकै दीर्घकालीन, मध्यकालीन पूँजी परिचालन गर्ने बजार नै हो । यस्तो नगर्ने भए यो धितोपत्र बजारको कुनै औचित्य रहँदैन । यसमा त कुनै शंका नै भएन । तर कहाँ, कुन क्षेत्रमा, कसरी र कति गरेको छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ । एउटै क्षेत्रमात्र हावी भएर गएको अवस्थामा छ । हामीले रियल क्षेत्रलाई बढाएर यतातिर चाहिँ पूँजी बढाउनुपर्ने देखिन्छ । जस्तै– अहिले जलविद्युत् क्षेत्रमा इक्विटी क्यापिटल यही बजारबाट संकलन भइरहेको छ । यो राम्रो कुरा हो । यस्तै अन्य क्षेत्रमा पनि यसको अभ्यास गर्न जरुरी छ ।
तपाईं विगतमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लि.को अध्यक्षसमेत हुनुहुन्थ्यो । हाल धितोपत्रको प्राथमिक बजार देशव्यापी रूपमा विकास विस्तार भएको छ । सोहीअनुसार दोस्रो बजारको सुविधा भने देशव्यापी हुन सकिरहेको छैन । यसमा के कस्तो सुधारको आवश्यकता देख्नुहुन्छ ?
दोस्रो बजार अहिले जुन राजधानी तथा शहर केन्द्रित भइरहेको छ, यसलाई देशव्यापी बनाउनैपर्छ । देशव्यापी रूपमा छरिएर रहेको पूँजीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने एउटा संस्थागत संयन्त्र भनेको धितोपत्र बजार नै हो । यसका लागि लगानीकर्तालाई साक्षर गराउनुपर्ने देखिन्छ । धितोपत्र बोर्ड मात्रै नभई नेप्से, ब्रोकर एशोसिएशन लगायत सम्बन्धित संस्थाहरूले संयुक्त रूपमा साक्षरता अभियान चलाउनुपर्छ । दोस्रो, प्रविधिको माध्यमबाट सम्भावित लगानीकर्ताको पहुँचमा बजार ल्याइदिनुपर्छ । यसको नियमन राम्रो बनाउन धितोपत्र बोर्डका शाखाहरू विभिन्न प्रदेशमा विकेन्द्रीकरण गराई सहज तवरले सर्वसाधारणको पहुँचमा ल्याउन सके राम्रो हुने देखिन्छ ।
गैरआवासीय नेपालीको लगानी पूँजीबजारमा भित्र्याउन कस्तो नीति लिनु उपयुक्त होला ?
म आफै सरकारी सेवामा हुँदा पनि विदेशी पूँजी नेपाल बजारमा भित्र्याउन भनेका हौं । यसो गर्न सकियो भने फाइदाजनक नै छ । एउटा फाइदा चाहिँ पूँजी स्वतः बढ्ने हुन्छ । शायद सरकारको नीतिभित्र पनि यो विषय परेको छ । विदेशी विनिमयसम्बन्धी कानूनी प्रावधान हेरेर र अध्ययन गरेर नेपाली पूँजीबजारमा यसलाई भित्र्याउन जरुरी देख्छु । बजारको क्षमता हेर्न पनि जरुरी देख्छु । नियमनकर्ता चलाख भएर हेर्न सकेन भने सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता कुरा पनि उठ्छन् । यस्ता विभिन्न कुरालाई अध्ययन गरेर नीति लिनु राम्रो देखिन्छ । र, म अझै पनि सो लगानीहरू पूँजीबजारमार्फत नेपाल भित्र्याउनुपर्छ भन्नेमा छु ।
धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड कस्तो होस् भन्ने चाहनुहुन्छ ? बोर्डलाई सुदृढ तथा सशक्त नियमन निकाय बनाउने सम्बन्धमा के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ ?
अहिले बोर्डलाई जिम्मेवारी थपिएको छ । हुन त कमोडिटी बजार प्रारम्भिक अवस्थामा छ । यसको नियमन भनेको अलिकति भिन्नै प्राविधिक विषय पनि हो । अरू संस्था ल्याउनुभन्दा बोर्डलाई जिम्मा दिनु राम्रो हो । तर बोर्डको संस्थागत क्षमतामा सुधार गर्नुपर्छ । यसअन्तर्गत बोर्डले पेशागत रूपमा विकसित गर्नेगरी दक्ष जनशक्ति ल्याउन जरुरी छ । निजामती कर्मचारीको काम गर्ने तौरतरीकामा बोर्ड चल्नु भएन । यसले निजीक्षेत्र र व्यवसायसँग डिल गर्नुपर्ने भएकाले समग्र काम सञ्चालन नै निजीक्षेत्रमैत्री हुनुप¥यो । यो भनेको कुनै काम दिँदा सेवाग्राहीले सहज रूपमा पाउनुपर्‍यो । निजीक्षेत्रको नियामक निकाय भएकाले बोर्ड ऊभन्दा चलाख भएर बस्नुप¥यो । नियमन भनेको खराब गर्नेलाई समात्ने असल गर्नेलाई प्रोत्साहित गर्ने हो । यसैले समग्र संस्थागत क्षमता बलियो हुनुपर्‍यो । बोर्डमा मैले थाहा पाएअनुसार धेरै पदाधिकारीहरू सरकारको पदेनसदस्य जाने गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालय, कानून, वाणिज्य लगायत मन्त्रालयका सहसचिवहरू जानेभन्दा पनि त्यहाँ जाने मान्छे साँच्चिकैको प्रोफेशनल, जान्ने बुझ्ने हुनुप¥यो । साथै काम गर्ने प्रक्रियामा स्वतन्त्र छोडिदिनुपर्छ ।